काग सम्मेलन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
‘यस्तो लाग्छ, मानौं म महान आत्मा हुँ, अरू सबै तुच्छ हुन् । बुद्धि मसँग मात्र छ, अरू सबै मूर्ख हुन् ।’
कार्तिक २९, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
काग तिहारको बिहान टपरीमा कागलाई खाने कुरा राखिदिएपछि कतै काग देखिन्छ कि भनेर ऊ आकाशतिर नियाल्दै थियो, गेटबाट ‘काग्–काग्’ को आवाज आयो । उसले पनि हाँस्तै ‘काग्–काग्’ गर्‍यो र गेट खोलिदियो । पाँच जना एकैचोटि भित्र पसे र न्यानो घाममा बगैंचाको टेबुल वरिपरि आसन जमाए ।
‘चिया केमा मगाऊँ ? कपमा कि गिलासमा ?’ चिरनले सोध्यो । गेट खोल्ने उही थियो ।
‘जेमा मगाए पनि हुन्छ । गाग्रीमा चाहिं होइन,’ एउटाले भन्यो ।
‘बुद्धिमान कागको कथा बिर्स्यौ ? गाग्रीमा टाउको छिराउन सकिंदैन । ढुंगा हाल्दै गएर तलको चिया माथि आएपछि मात्र खान पाइन्छ । त्यतिन्जेलमा चिया सेलाइसकेको हुन्छ ।’
हाँसोको विस्फोट भयो ।
वर्षमा एकपल्ट काग तिहारका दिन भेला हुने यो सानो समूह थियो । यस दिन उनीहरू एक अर्कालाई कागको भाषामा अभिवादन गर्थे । चिरनको पूरा नाम चिरञ्जीवी थियो, जसको एउटा अर्थ नै ‘काग’ भन्ने हुन्थ्यो । हरेक वर्ष सबैजना उसैकहाँ भेला हुन्थे । सबैभन्दा समृद्ध पनि उही थियो ।
केटाकेटीदेखिका साथी थिए उनीहरू । नाकबाट सिंगान चुहाउँदै, एउटा हातले कट्टु समातेर चुँडिएको चंगा पछाडि दौडिने वेलादेखिका । स्कूल पढ्दा चंगा उडाउँथे । कलेज पढ्दा आकाशपाताल जोडेर अरूलाई उडाउँथे । ‘विद्वान’ भएपछि स्वाभाविक रूपमा आफ्ना चाडपर्वलाई उडाउन थाले । हरेकले एउटा चाडको जिम्मा लिएको थियो, जसलाई उडाउन ऊ स्वतन्त्र थियो । एक जना चिरन मात्र यो धन्दामा थिएन । उसले कुनै चाडलाई उडाउने जिम्मा लिएको थिएन । वर्षमा एक दिन भने उनीहरू एक–अर्कालाई नै उडाउँथे, कागलाई साक्षी राखेर ।
चाडपर्व आउँदा दुनियाँ खुशी हुन्थे, यिनीहरू भने त्यसमा भ्वाङ पार्ने कोशिश गर्थे । जुनसुकै चाडमा पनि एउटा न एउटा कराउन थालिहाल्थ्यो, ‘लौ बर्बाद हुने भो । चाडपर्व भन्दैमा यस्तो पनि गर्न हुन्छ ? खत्तमै हुने भो ।’
‘तिमी पनि अति गर्छौ यार,’ ‘क’ लाई चिरनले भन्यो, ‘केही नपाएर शिवरात्रिमा धुनी बालेको पनि विरोध गर्ने ?’
‘शिवरात्रि भन्दैमा रातभरि मूढा बालेर बस्न पाइन्छ ? यसरी त सारा वनजंगल सखाप हुन्छ । वातावरण विनाश हुन्छ । वनजंगलै रहेन भने पृथ्वी कसरी बाँकी रहन्छ ?’ ऊ जोशियो, ‘त्यसमाथि शिवरात्रिमा गाँजा खान किन छूट ? गँजडी जोगी–संन्यासीलाई सरकारले किन कार्वाही गर्दैन ?’
‘ख’ हाँस्यो, ‘बढ्ता गफ नदेऊ । गएको शिवरात्रिमा गाँजा खाएर रातभरि मृगस्थलीमा जोगीको धुनीमा लड्ने चाहिं को हो ? भोलिपल्ट बिहान मैले नै घिसारेर ल्याएको होइन तिमीलाई ?’
‘त्यति सानो कुरालाई ठूलो नबनाऊ न यार,’ ऊ मुसुक्क हाँस्यो । अनि ‘ख’ लाई दपेट्यो, ‘होलीको विरोधमा तिमी पनि त कम उफ्रँदैनौ नि । जाबो एक दिन खेल्ने रंगसँग पनि कत्रो दुश्मनी त ?’
‘रंगमा कति केमिकल हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ ? त्यसले छालामा घाउ हुन सक्छ । आँखालाई नोक्सान हुन सक्छ । कपाल झर्न सक्छ । क्यान्सर पनि हुन सक्छ । होली भनेर आफ्नै जीउ खत्तम पार्ने ?’ ‘ख’ बम्कियो, ‘झन् अर्कालाई रंग लगाइदिनु त मानव अधिकारकै हनन हो ।’
‘त्यही भएर होला, जहिले पनि खुसुक्क हामीकहाँ आएर होली खेल्ने गरेको,’ ‘ग’ ले भनिन्, ‘हाम्रोमा त तिमी पागल जस्तै भएर आफू पनि रंगमा डुब्छौ, अरूलाई पनि डुबाउँछौ नि ।’
‘व्यक्तिगत कुरा नगर न । होलीको मजा त लिनु परिहाल्यो नि,’ उसले उनैलाई प्रश्न गर्‍यो, ‘अनि तिमीलाई चाहिं तीजमा अरू व्रत बस्ता किन कन्पारो तातेको त ?’
‘अर्काका लागि व्रत बस्नु दासता हो । अज्ञान हो । अन्धविश्वास हो । कुरीति हो । मूर्खता हो,’ उनले खरर्र भनिन्, ‘यो नारी जातिकै अपमान हो ।’
‘लौ, आज दिउसै रात पर्ने भो,’ ‘घ’ हाँस्न थाल्यो, ‘मेरी श्रीमतीसँग त फलफूल मात्र खाएर व्रत बसौं है भनेर सल्लाह मिलाएकी थियौ अरे त ?’
‘त्यो त मेरो व्यक्तिगत इच्छा हो नि । म के खान्छु, के खान्नँ, त्योसित अरूलाई के मतलब ?’ उनी झ्वाँक्किइन् ।
‘तिम्रो हिसाबकिताप पनि त कम छैन नि,’ ‘घ’ लाई अर्काले छेड हान्यो, ‘दशैंमा टीका लगाउँदा चामल खेर जान्छ भनेर टीकाकै विरोध गर्ने ?’
‘तीन करोड नेपाली मध्ये दुई करोडले पाँच दिनमा दश घरमा टीका लगाए र एक जनाले निधारमा जम्माजम्मी ५० ग्राम मात्र टीका थाप्यो भने पनि एक हजार टन चामल खेर जान्छ । यो सानो बर्बादी हो ?’ ‘घ’ ले टेबुल ठोक्यो, ‘त्यसमाथि दशैं भनेर जताततै पीङ थाप्छन् । पीङबाट मान्छे खस्यो भने के हुन्छ ? हामी स्कूल पढ्दा हाम्रै पियनको छोरो पीङबाट खसेको होइन ?’
‘त्यसो भए तिमी चाहिं किन शाखासन्तान लिएर ससुराली चहार्दै हिंडेको त ?’, यो ‘ङ’ को छड्के थियो ।
‘म आफ्नो इच्छाले थोडै गएको हुँ । केटाकेटीले मामाघर जाने भने, उनीहरूको इच्छा पूरा गरिदिनुपरेन ?’ ऊ पटक्कै हच्केन । उल्टो ‘ङ’ लाई जिस्क्यायो, ‘तिहार आयो कि तिमी पटका भन्दा चर्को पड्किन थाल्छौ । अर्काले पटका पड्काउँदा किन टाउको दुखाउनु ?’
‘पटका त बन्द गर्नैपर्छ, बत्तीलाई पनि छोड्न हुँदैन । पटकाको आवाजले केटाकेटीको कानको जाली फाट्न सक्छ । उनीहरू बहिरा हुन सक्छन् । बूढाबूढीलाई हार्ट अट्याक हुन सक्छ । जथाभाबी दियो बालेर झिलिमिली पार्छु भन्दा आगलागी हुन सक्छ,’ तिहार लागेकाले ‘ङ’ को जोश चरम चुलीमा थियो, ‘पटका पड्काउँदा हरेक वर्ष देशमा २० जना बच्चाको हात पोलेको तथ्यांक छ । पोहोर साल छिमेकी मुलुकको एउटा घरमा तिहारकै बेला आगो लागेको थियो ।’
‘सब जनाले गजब गरेका रहेछौ । अब एउटा कुरा भन त,’ चिरनले सोध्यो, ‘तिमीहरूले भनेको कति जनाले मानेका छन् ?’
पाँचै जना हानथाप गरेर एकैचोटि बोल्न थाले । तिनको भनाइ थियो— अहँ, कसैले मानेको छैन । हाम्रा कुरा सुनेर हल्ला गर्ने त बढे, तर तिनका कुरा कसैले सुन्दैन । हाम्रै घरमा समेत हाम्रा कुरा कसैले सुनेको छैन ।
‘अरूलाई के भन्छौ, आफू पनि त त्यही ड्याङका मूला रहेछौ नि,’ चिरनले जिस्क्यायो ।
‘सामाजिक कुरा बेग्लै हो, व्यक्तिगत कुरा बेग्लै ।’
यत्तिकैमा खाजा आयो । सबैजना तातो सेल खान थाले । चिरनले फेरि सोध्यो, ‘चाडपर्वको मात्र पछि लागेका छौ कि अरू क्षेत्रमा पनि पस्यौ ?’
‘क’ ले बेलिविस्तार लगायो, ‘वर्ष दिनमा एकपल्ट आउने चाडपर्वले मात्र के पुग्थ्यो ? त्यसैले महिला, दलित, जनजाति, बाल अधिकार र उपभोक्ता अधिकारमा पनि पसेका छौं । यो वर्ष अरू एक एक वटा थप्छौं । सानोमा चंगा लुटेजस्तै त हो नि ।’
‘एक–अर्कालाई कत्तिको सघाउँछौ ?’
‘ख’ अघि सर्‍यो, ‘हामीकहाँ त्यस्तो चलन छैन । अरूका कुरा हेर्ने हाम्रा आँखै हुँदैनन् । उदाहरणका लागि, महिलाको क्षेत्र समातेको छ भने महिलाकै कुरा मात्र देख्छौं । अरूतिर जति ठूलो अन्याय, अत्याचार अथवा अपराध होस्, हामीले देख्तैनौं, सुन्दैनौं, अनि बोल्दा पनि बोल्दैनौं । हामीलाई के मतलब ?’
‘अब दुइटा कुरा भन है त । यो काम गर्दा कस्तो लाग्छ ?’
‘घ’ भन्न थाल्यो, ‘यस्तो लाग्छ, मानौं म महान आत्मा हुँ, अरू सबै तुच्छ हुन् । बुद्धि मसँग मात्र छ, अरू सबै मूर्ख हुन् । चेतना भएको म मात्र हुँ, अरूमा चेतना छैन । तिनले जानेको सत्य, सत्य होइन; मैले जे भन्छु त्यो मात्र सत्य हो । त्यसैले मैले तिनलाई बाटो देखाउनुपर्छ, तिनले मैले भनेको मान्नुपर्छ ।’
‘अरू सबैलाई भरमार गाली गर्छौ । कहिलेकाहीं त अरूले पनि तिमीहरूलाई केही भन्दा होलान् । त्यसवेला कस्तो लाग्छ ?’
‘ग’ ले बताइन्, ‘ओहो, कुरै नगर्नोस् । कसैले छिसिक्क केही भन्यो कि रन्का छुट्छ । जीउ काम्न थाल्छ । ब्रहृमाण्ड नै खलबलिन्छ । मलाई यसो भन्ने त्यसको के हैसियत भन्ने लाग्छ । अर्काका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन, मान्नुपर्छ भन्ने त लाग्ने कुरै भएन । सारा शक्ति लगाएर त्यसलाई त्यतिवेलै चिथोरूँ जस्तो लाग्छ ।’
‘धन्न म यो धन्दामा लागिनछु,’ चिरनले बिट मार्‍यो, ‘यसपालिको भेला अब टुंग्याऔं क्यार । सबैलाई तिहारको शुभकामना । काग्–काग् ।’
सबै जना कुर्सीबाट उठे र भने, ‘काग्–काग् ।’
गेटमा पुग्ने वेला ‘ङ’ ले भन्यो, ‘मलाई एउटा कुरा भन्नु छ ।’
चिरनले सोध्यो, ‘के ?’
‘दुई झोला पटका त मलाई पनि राखिदिनुपर्छ है । नत्र केटाकेटीले मार्छन् । म भोलि लिन आउँछु ।’
‘हाम्रो भाग छुट्ला नि !’ क–ख–ग–घ को मुख एकैचोटि खुल्यो ।
‘काग्–काग्’, चिरन मुस्कुरायो ।
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७७ ०८:४८
क्रिकेट प्रशिक्षकको अन्तर्वार्ता आजदेखि
काठमाडौँ — नेपाल क्रिकेटको प्रमुख प्रशिक्षक बन्न ७२ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यसमा भारतका चेतन शर्मा, श्रीलंकाका पुबुदु दासानायके, अस्ट्रेलियाका डेव ह्वाटमोर, दक्षिण अफ्रिकाका लान्स क्लुसनर र नेपालका शेरबहादुर (सुनील) लामालगायतका छन् ।
श्रीलंकाका पूर्व विकेटकिपर दासानायके यसअघि ६ वर्ष नेपालको प्रशिक्षक रहेर सन् २०१६ मा फर्किएका थिए । उनको प्रशिक्षणमा नेपालले २०१४ मा बंगलादेशमा भएको विश्व ट्वान्टी–२० मा खेलेको थियो । ह्वाटमोरको प्रशिक्षणमा श्रीलंकाले १९९६ को विश्वकप जितेको थियो । दक्षिण अफ्रिकी अलराउन्डर क्लुसनर १९९९ को विश्वकपमा म्यान अफ द सिरिज चुनिएका थिए ।
शर्मा भारतका पूर्व तीव्र गतिका बलर हुन् । नेपाली मूलका लामाले हङकङबाट खेलेका थिए र हङकङको युवा टोलीका प्रशिक्षक रहिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार क्यानले आवेदन आएकाहरूमध्येबाट छनोट गरी २१ जनामा झारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले त्यसबाट अझ छनोट गर्ने र त्यसबाट अन्तर्वार्ता लिने भएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले तिहारअघि प्रमुख प्रशिक्षक र क्रिकेट म्यानेजरको अन्तर्वार्ता प्रकृया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
क्यानले केही समयअघि प्रमुख प्रशिक्षक र क्रिकेट म्यानेजरसहित जनरल म्यानेजर, फाइनान्स म्यानेजर र सात प्रदेशका लागि प्रशिक्षकमा आवेदन खोलेको थियो । जनरल म्यानेजरमा २०, फाइनान्स म्यानेजरमा १५ र प्रदेश प्रशिक्षकमा २६ जनाको आवेदन परेको क्यान स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश प्रशिक्षकका लागि छनोट गरेर १४ जना ल्याइएको छ ।
क्यानको बोर्ड बैठकले मंसिर ३ गते बस्ने साधारणसभाका लागि एजेन्डाहरू तय गरेको छ । वार्षिक लेखापरीक्षण, सन् २०२१ को बजेट तथा कार्यक्रम, रणनीतिक योजना कार्यक्रम, जिल्ला तथा प्रादेशिक संघहरूको कार्यविधि निर्माण, संघ पदाधिकारीहरूको आचरण संहिता निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, एन्टी डोपिङ, इथिक्स पोलिसी निर्माण साधारणसभाका लागि एजेन्डा तय भएको क्यानले जनाएको छ ।
बोर्ड बैठकले क्यानको आर्थिक नियमावलीमा छलफल गरिएको र थप छलफल गर्दै अर्को बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । क्यानको बोर्ड बैठकले नेपाल क्रिकेट अम्पायर र स्कोरर संघले प्रस्ताव गरेको विधान क्यानमातहत रहने गरी मान्यता प्रदान गरेको छ । प्रस्तावित नेपाल प्रिमियर लिगको ड्राफ्टलाई बोर्ड बैठकमा छलफल गरिँदै साधारणसभामा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७७ ०८:३६